Noble Quran » soomaali » Sorah An-Najm ( The Star )
Wuxuu ku dhaartay (Eebe) Xiddiggu markuu hoobto.
Ee saaxiibkiin (Nabigu) ma dhumin, xaqana kama leexan.
Kumana hadlo hawadiisa.
quraankuna waxaan waxyi Eebe ahayn ma aha.
Waxaana wax baray (oo xagga Eebe ka soo gaadhsiiyay) ku xoog wayn, (Malaku Jibriil).
Ee caafimaad iyo quwaba leh, abuuriddiisuna egtahay.
Wuxuu joogay jihadii sare (Jibriil).
Kaddibna u soo dhawaaday kuna soo hoobtay (Nabiga).
Intuu uga jirsado Qaanso (xadhiggeed) ama ka dhaw.
Wuxuuna Eebe waxyooday Addoonkiisa (Nabiga) wuxuu u waxyooday.
Qalbiguna Ma beeniyo wuxuu arkay (Nabigu).
Ee ma idinkaa ka murmi «kana doodi» wuxuu arkay.
Dhabnimuu Nabigu u arkay Jibrill mar kale.
Agteedana waxaa ah Jannatul-ma'waa.
(Wuxuu arkay) waqtiguu daboolayay Sidrada wax daboola.
Arragguna kama iilan wuxuu arkay (Nabigu) mana xadgudbin.
Dhabnimo yuuna u arkay (Nabigu) Aayado Eebe oo waawayn.
Iya Manaatadii saddexaad ee kale.
Idinku ma waxaad leedihiin Lab Eebana Dhaddigga.
Taasi waa qayb dulan ah.
Sanammaduna magacyo aad magacowdeen idinka iyo Aabayawgiin mooyeen wax kale ma aha, wax xuja ahna Eebe uma soo dajinin, waxaan mala ahaynna ma raacayaan iyo waxa naftoodu doonto, xagga Eebana waxaa uga yimid hanuun.
Mise dadka waxaa u sugnaaday waxay yididiishaan.
Badanaa Malag Samada ku sugan oon shafeecadiisu waxba anfacaynin in Eebe idmo mooyee, Cidduu la doono oo ka raalli noqdo.
Kuwa aan rumaynin Aakhiro waxay Malaa'igta ku magacaabi magac dhaddig.
Wax cilmi ahna uma laha, ee waxay raaci mala uun, malana xaqa wax kama taro.
Ee iskaga jeedso (nabiyow) Ruux ka tagay xukayga (Quraanka) oon doonin waxaan nolosha Adduunka ahayn.
Kaasina waa garaadkooda aqooneed intuu gaadhay, Eebana waa ogyahay cidda ka dhuntay jidkiisa, waana ogyahay cidda hanuunsan.
Samaawaadka iyo Dhulka waxa ku sugan Eebaa iska leh, si uu uga abaalmariyo kuwa xumaanta falay camalkoodii, ugana abaalmariyo kuwii wanaagga falay wanaag.
Waana kuwa ka fogaada dambiga waawayn iyo xumaanta, wax yaryar mooyeen, Eebana waa waasac dambidhaafkiisu, wuuna idin ogyahay markuu idinka abuuray Dhulka iyo markaad ku asturantihiin uurka hooyadiin, ee Naftiinna ha ammaanina Eebaa og cidda dhawrsashada badane.
Ka warrama midka xaqa ka jeedsaday.
Oo wax ar bixiyay inta kalana reebtay.
Ma agtiisaa cilmiga maqan yaallaa oo wuu arkaa.
Miyaan looga warramin (dadka) wixii ku yiillay Kitaabkii (Nabi Muuse).
Inaan nafna dambi naf kale qaadaynin.
Ruuxna wuxuusan camalfalin heleeynin.
Camalkiisana la arki doono.
Ka dibna looga abaalmarin doono si buuxda.
Eebaa xaggiisana loo ahaan.
Isagaana wax dila waxna nooleeya.